Mune maindasitiri akasiyana, maitiro ekugadzira emulsion anosiyana zvakanyanya. Iyi misiyano inosanganisira izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa (musanganiswa, kusanganisira akasiyana zvikamu mune mhinduro), emulsification nzira, uye zvimwe mamiriro ekugadzirisa Emulsions ndiko kupararira kwemaviri kana anopfuura emvura isingabatike. Yakanyanya kusimba ultrasound inopa simba rinodikanwa kuti riparadzire chikamu chemvura (chikamu chakapararira) muchidonhwe chidiki cheimwe chikamu chechipiri (chinoenderera chikamu).
Ultrasonic emulsification michinaMaitiro ari maviri (kana anopfuura maviri) emvura isingasanganisike akasanganiswa zvakaenzana kuumba nzira yekupararira pasi pechiito cheiyo ultrasonic simba. Mvura imwe chete yakagovaniswa zvakaenzana mune imwe mvura kuita emulsion. Inofananidzwa neyakajairika emulsification tekinoroji nemidziyo (senge propeller, colloid mill uye homogenizer, nezvimwewo), Ultrasonic emulsification ine hunhu hweakakwira emulsification mhando, yakagadzika emulsification zvigadzirwa uye yakaderera simba inodiwa.
Kune akawanda mafekitori mafomu e Ultrasonic emulsification, uye ultrasonic emulsification ndeimwe yehunyanzvi hunoshandiswa mukugadzira chikafu. Semuenzaniso, zvinwiwa, ketchup, mayonnaise, jamu, mukaka wakagadzirwa, chikafu chevacheche, chokoreti, mafuta esaradhi, mafuta, shuga mvura uye mamwe marudzi echikafu chakasanganiswa chinoshandiswa muindasitiri yezvikafu akaedzwa uye akagamuchirwa kumba nekunze, uye akawana mhedzisiro yekuvandudza mhando yechigadzirwa uye kugona kwekugadzira, uye mvura-inogadziriswa carotene emulsification yakaedzwa zvinobudirira uye yakashandiswa mukugadzira.
Banana peel poda yakafananidzirwa neiyo ultrasonic yakapararira inosanganiswa neyakaipisisa kumanikidza kubika, uyezve hydrolyzed neamylase. Chinhu chimwechete chekuyedza chakashandiswa kuongorora mhedzisiro yeiyi prereatment pachiyero chekuburitsa fiber yakasanganiswa yezvikafu kubva kubhanana peel uye iyo physicochemical zvivakwa zveasina kusimba chikafu chekudya kubva kubhanana peel. Mhedzisiro yacho yakaratidza kuti simba rekubata mvura uye rinosunga simba remvura yeiyo ultrasonic yakapararira yakasanganiswa neepamusoro-yekumanikidza yekubika kurapwa yakawedzerwa ne5.05g / g uye 4.66g / g, zvichiteerana 60 g / g uye 0. 4 ml / g zvichiteerana.
Ndinovimba zviri pamusoro zvinogona kukubatsira zvirinani kushandisa chigadzirwa.